Aragtiwanaagsan.com – Dhacdooyin
Latest update October 18th, 2018 2:34 PM
heestii shuhadada snm
Category Archive: Dhacdooyin, Wararka, Waxbarasho
Gabadh qoraaya oo reer Saambiyo ah oo ku guuleystay abaalmarin 15,000 oo doolar
Jul 07, 2015 cabdicasiis mohamed Dhacdooyin, Wararka, Waxbarasho 0
waa gabadha qoraaga ah,ee ku guuleysatay abaalmarinta 15,000 ee doolar/Ms Serpell. Gabadh qoraaya oo reer Saambiyo ah,oo dagan dalkaasi mareykanka ayaa waxay maanta ku guuleystay abaalmarinta(Caine...
Xafladihii lagu xusaayey ee loogu baroor diiqaayey dadkii ku dhintay Qaraxyadii London oo maanta qabsoomay!
Jul 07, 2015 cabdicasiis mohamed Dhacdooyin, Wararka 0
xafladihii loogu baroor diiqaayey ee lagu xusaayey dadkii Qaraxyadii London ee 3 da Tareen ee dhulka hoos mara iyo baskii ku dhintay ayaa maanta la qabtay iyadoo uu jawigu ahaa mid dagan oo aan...
Qaraxyadii London ka dhacay 10 sano ka hor oo maanta la xusi doono!
Xus ayaa maanta ka dhici doona meesha loo yaqaano St Paul’s Cathedral maanta xilli dambe, si loo xuso 10 sano guuradii ka soo wareegtay markii weerarkii argagixisado ka dhacay magaalada...
Maroodiyaal dalka Zimbabwe laga duuliyey oo loo duuliyey dalka China!
Jul 06, 2015 cabdicasiis mohamed Dhacdooyin, Wararka 0
ugu yaraan 20 Maroodi ayaa ka dagay dalkaasi China,markii diyaarad laga saaray caasimadda Zimbabwe ee Harare.waxa lagu iibiyey oo la siiyey qiimo dhan (40,000) oo dollars,markii la soo qabtay...
Dakharada goobta dagaalka! Carruurta Qasa oo la nool sheekooyin Dagaal!
wiil yar oo 12 jir ah oo reer Qasa ah,oo ay wariyaddu wareysatay! Hal sano ka hor,maanta oo kale ayaa dagaal ka dhex bilaabmay ciidamada israa’iil iyo kooxaha dagaalyahanka ah,ee reer falastiin...
Bako Xaraam oo todobaad dhiig daadasho ah,ku qaaday dalka Nayjeeriya!
Jul 05, 2015 cabdicasiis mohamed Dhacdooyin, Wararka 0
qof naftii qarxiye ah,ayaa Kiniisad weeraray oo isku qarxiyey,taas oo keentay in todobaad dhiig daadasho ah ka bilaabmato dalkaasi Nayjeeriya,oo ay naftoodii ku waayaan ama ay dhinteen dad ka badan...
Hal daqiiqo ayaa loo wada aamusay dalka ingiriiska,dadkii ingiriiska ahaa,ee lagu xasuuqay xeebta Tuuniisiya!
Jul 04, 2015 cabdicasiis mohamed Dhacdooyin, Wararka 0
hal daqiiqo ayaa loo aamusay dadkii ku dhintay xeebta Tuuniisiya ee ninka dableyda ahi ku laayey.Dalka ingiriiska oo dhan waxa laga arkaayey iyada oo laga wada aamusay hal daqiiqo, si loo xasuustay...
Gaadhi inta uu wadadii ka baxay,oo dusha kaga soo dhacay saanqaaf guri dalka South Africa!
Jul 03, 2015 cabdicasiis mohamed Dhacdooyin, Wararka 0
Gaadhi maraayey meel u dhow guri ayaa inta uu jidkii ka baxay dusha kaga yimid guri oo xaga sare ee saanqaafka kaga soo duldhacay,sida leebka magaalo xeebeedda ku taalla dalka south Africa ee...
Shilalka baabuurta oo aad iyo aad ugu badan wadooyinka magaalada Hargeysa!
Jul 02, 2015 cabdicasiis mohamed Dhacdooyin, Wararka 0
Shilalka baabuurta ayaa aad iyo aad ugu badan magaalada Hargeysa..meelkastood mareyso waxaad arkaysaa shil baabuur ama isku dhac baabuur ama isxagasho baabuur oo la dul taaganyahay ama lagu...
Amiirka U dhashay Sucuudiga ee la yidhaahdo..Alwaliid binu Dalaal oo 32 bilyan, samofal ahaan ugu deeqay!
Amiirka maalqabeenka ah,ee Alwaliid Binu Dalaal,ee u dhashay dalkaasi Sucuudiga,ayaa waxa uu sheegay in uu hanti dhan 32 bilyan uu ku deeqaayo arrimaha samofalka ama sadaqo ahaan.Maalqabeenkan 60 ...
https://www.youtube.com/watch?v=yQLABXaS2lY cabdicasiis mohamed
Ila akhriso Lixdan Xadiis ee sawiraaya Muqaalka...